ktmkhabar.com - ९० हजार ६०० रुपैयाँ पुग्यो सुनको भाउ
९० हजार ६०० रुपैयाँ पुग्यो सुनको भाउ
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ थप २०० रुपैयाँले महँगिन पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत बिहीबार तोलामा ५०० रुपैयाँले वृद्धि भएर ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार थप २०० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै ९० हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको हो ।
यस्तै, आज तेजाबी सुनको मूल्य समेत २०० रुपैयाँले नै वृद्धि हुँदै ९० हजार १५० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । तर यता चाँदीको मूल्य भने आज शुक्रबार गत बिहीबारकै मूल्य कायम रहँदै अस्थिर रहेको महासंघले जनाएको छ । गत बिहीबार चाँदी प्रतितोला एक हजार १७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
स्थिर देखियो शेयर बजार, ७ अर्बको कारोबार
सात वाणिज्य बैंकले घोषणा गरे लाभांश, कुनको कति ?
मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको आइपिओ खुल्यो, कति दिने आवेदन ?
बढ्यो नेप्से, बढेन कारोबार
नेपाल टेलिकमले ल्यायो दशैं विशेष अफर, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग